यस्तो के भयो भगवान ? मोरंगमा तालुनै नभएको बच्चा जन्मियो , जिबनको अन्तिम सास फेर्दै हेर्नुस (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
यस्तो के भयो भगवान ? मोरंगमा तालुनै नभएको बच्चा जन्मियो , जिबनको अन्तिम सास फेर्दै हेर्नुस (भिडियो सहित)
Sisir Budhathoki September 17, 2019
झापाको दमक स्थित आम्दा अस्पतालमा प्रसुती गराउन आएकी एक महिलाले फरक प्रकृतीको शिशुलाई जन्म दिएकी छन् ।मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नं ७ मधुमल्लाकी गुराँस कार्कीले टाउकोको माथिल्लो भाग, तालु बिनाको शिशुलाई जन्म दिएकी हुन् । आम्दा अस्पतालका फेमेली फेजिसियन डा. प्रकाश शर्माका अनुसार गर्भावस्थामा पोषिलो खानेकुराको अभाव हुँदा र नियमित स्वास्थ्य परिक्षण नगराएमा यस प्रकारका समस्या हुने गरेको बताएका छन ।
२४ वर्षिया गुराँश र ३० बर्षीय सुजनको दोस्रो सन्तानको रुपमा जन्मीएकी छोरीको तालु नभएको अवस्थामा जन्म भएपछि यसको उपचार हुन्छ कि हँुदैन भन्दै परिवारजनमा चिन्ता थपीएको छ । आर्थिक अवस्था समेत कमजोर रहेको कार्की परिवारमा तालुनै नभएको शिशु जन्मिएपछि थप संकट आईलागेको छ । बाबु सुजन कार्की घर बनाउने डकर्मी काम गर्दै आएको बताएका छन । तल भिडियोमा जस्ताको तस्तै हेर्नुहोला ।